Tena be atao amin'ny tapany voalohany 2021 ho an'i Ellicott - Ellicott Dredges
Sasao voalohany be dia be 2021 ho an'i Ellicott
Ny tapany voalohany tamin'ny 2021 dia niasa be ho an'ny Ellicott Dredges, LLC ary samy sahirana amin'ny fanamboarana sy fandefasana dredges erak'izao tontolo izao ny trano fanamboarana any Baltimore sy New Richmond. Hatramin'ny 10 Jona dia hatreto i Ellicott:
Nandefa dredge sy fanamafisana 14 tanteraka, ho an'ny mpanjifa 11 samihafa any amin'ny firenena 5 samihafa.
9 amin'ireo entana ireo dia dredge Suction Dragon® Cutter Suction, manomboka amin'ny habe sy maodely 370HPs (10 ″) ka hatramin'ny 2070s (20 ″)
Fivoriambe Booster Pump 5 no nalefa tany amin'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny 20 ″ Tier 4 Booster vaovao an'ny Ellicott (misimisy kokoa momba ity vokatra vaovao ity etsy ambany)
Ireo entana rehetra natambatra ireo dia nitaky entana 50 mahery handefasana azy!
Fandefasana dredge andiany 670 avy amin'ny Factory Factory Baltimore
Ellicott Field Tech Josh Moscati eo amin'ny toerana misy Pump 20 oster Booster miasa
Ny paompy booster 20 ″ vao navoakan'i Ellicott dia misy maotera EPA Tier 4 nomena 1125 HP (838 kW). Ny booster dia miasa ankehitriny manohana ny tetikasan'ny Corps of Engineers 'DMP any Poplar Island, Maryland. Ity tetik'asa ity dia mitaky famoahana entana mitentina 1.9 tapitrisa yd3 misy dredged mankany amin'ilay toerana fametrahana azy.
Ellicott dia manolotra tsipika feno «dredge suction» sy «pump booster» azo entina avy any amin'ny toerana roa misy anay: Birao lehibe sy birao mpanatanteraka any Baltimore, Maryland, ary orinasa faharoa any New Richmond, Wisconsin, Etazonia.